अब प्रदेश बिश्वबिद्यालय उत्कृष्ट बनाउनेमा ध्यान केन्द्रीत गर्न जोड - Arthapage
अब प्रदेश बिश्वबिद्यालय उत्कृष्ट बनाउनेमा ध्यान केन्द्रीत गर्न जोड
प्रकाशित मितिः ५ असार २०७७, शुक्रबार ०९:३९ June 19, 2020
प्रदेश नं. ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा बाँकेलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गर्दा बाँकेका धेरै योजनाहरु समेटिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रह्यो, प्रदेश बिश्वबिद्यालय । नहोस् पनि किन ? बिश्वबिद्यालय बनाउने बाँकेको वर्षौदेखिको सपना पुरा हुँदै थियो ।
‘लामो संघषै पछि बिश्वबिद्यालय बाँकेमा बन्ने भयो । म असाध्यै खुःसी छुु ।’ बिश्वबिद्यालय स्थापनार्थ हुने संघर्षका अभियानता पशुपति दयाल मिश्र भन्छन्–‘खासमा हामीले उहिल्यै नेपालगन्ज बिश्वबिद्यालय माग गरेका थियौं । संघीय संसदमा बिधेयक पेश पनि भयो तर कहाँ हरायो हरायो ? अहिले प्रदेशकै भए पनि बिश्वबिद्यालय आउनु राम्रै कुरा हो ।’ तत्कालिन विकास क्षेत्रमा बिश्वबिद्यालय स्थापना हुँदा यहाँ पनि नेपालगन्ज बिश्वबिद्यालयको माग भएको थियो । बिश्वबिद्यालयकै लागि संघर्ष समिति बनाएर चरणबद्धन आन्दोलन नभएको पनि होइन । तर अन्य ठाउँमा बिश्वबिद्यालय बन्दा नेपालगन्ज बिश्वबिद्यालय बनाउने कुरा भने त्यसै फासफुस भयो । नेपालगन्ज बिश्वबिद्यालय अब नबन्ने निष्कर्ष सहित आन्दोलन तुहियो ।
ठिक त्यही बेला प्रदेश सरकारले प्रदेश बिश्वबिद्यालयको अवधारणा ल्यायो । त्यही मौकामा बाँके फेरी बिश्वबिद्यालयको आवाज उठ्न थाल्यो ।
‘यसलाई अवसरका रुपमा लिएर हामीले बिश्वबिद्यालय प्राप्तीको अभियान चलायौं ।’ प्रदेश सांसद समेत रहेका नेकपा बाँकेका अध्यक्ष आईपी खरेल भन्छन्–‘ दाङ्ग र रुपन्देहीमा बिश्वबिद्यालय रहेको र प्रदेशको बनावटप्रति असन्तुष्ट रहेका बाँके, बर्दियाका नागरिकलाई पायक पर्ने गरी प्रदेश बिश्वबिद्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरेर हामीले मुख्यमन्त्रीसंग कुरा राख्यौं ।’
बाँकेका सर्वदलिय टोलीसंगको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाँकेमा प्रदेश बिश्वबिद्यालय बनाउन आफु सकारात्मक भएको तर पूर्वाधार तयार गर्न कम्तिमा सय बिगाह जग्गा चाहिने बताए । त्यस लगत्तै खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिले उक्त जग्गाको जोहो गरेपछि बिश्वबिद्यालयको काम अगाडी बढेको हो ।
बजेटमै प्रदेशलाई आवश्यक वन, कृषि, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुनासाथ बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ । यसका लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपति किस्मत कक्षपति भन्छन्–‘प्रदेशले बाँकेवासीका लागि ठुलो मल्हम लगाएको छ । अब हामी बिश्वबिद्यालय बनाउनतर्फ पुरै ध्यान केन्द्रीत गर्छौ ।’
प्रकाशित मितिः ५ असार २०७७, शुक्रबार ०९:३९ |
Prevदुध चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा
Nextप्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बिभिन्न क्षेत्रमा छुट दिने घोषणा